Xafaddii soo dhaweynta Madaxweynha Somaliya Xasan Sheekh ee ka dhacday London | sonna.net
You are hereHome » Xafaddii soo dhaweynta Madaxweynha Somaliya Xasan Sheekh ee ka dhacday London Xafaddii soo dhaweynta Madaxweynha Somaliya Xasan Sheekh ee ka dhacday London
Awdalpress - London - Xalay oo ay taariikhdu ahayd 2dii Feb. 2013 waxa Hall ku yaalla Central London lagu qabtay xaflad aad loo soo cammiray, shacabka ka soo qayb galayna waxa ay isugu jireen waayeel iyo dhallinyaro, rag iyo dumarba leh.
Safafkaa oo laba dhinac ahaa sida, safka dumarka iyo ka ragga, waxa aan isku dayey in aan u kuur galo sida uu u habaysan yahay amma uu u habacsan yahay. Laakiin waxa aan arkayey dad ilbax ah oo si asluub iyo buuq la'aan ah ugu jiray safafka qof wallibana marka uu meesha yimaaddo xagga dambe ayuu safka dheer ka soo qabsanayey, isla markaana sheeko iyo kaftan ayey ku sugayey inta iridda laga furayo.
Sagaalkii iyo badhii fiidnimo ayaa Madaxweynihii iyo wafdigiisa oo ay ku jirtay wasiirka arrmaha dibadda Foziya Xaaji Aden ay soo galeen, waxana lagu soo dhaweeyey sawaxan, xammaasad iyo heesta...Somaliyey Toosoo. Calanka Buluuga iyo calanka Ingiriiska ayaa garbaha u sudhnaa, meel walbana ka lushay.
Ugu horreyn waxa uu hormarsaday salaanta islaamka, nabiga oo uu ku salliyey, kaddibna, waxa uu yidhi, ' Walaalayaa, waxa aad ogtihiin in aan jid dheer soo marray welina soconno. Laakiin nasiib wanaag aan joogno meel ay innoo muuqato in aan ka aadi karno jidkii toosnaa.
Waxa aan soo gudubnay dawlad la'aan waxa inna soo martay dagaallo sokeeye oo lagu hoobtay, inna kala firdhiyey oo dalkeennii iyo dawladnimadeennii baabi'iyey. Waase Ilaahay mahaddii mar haddii maanta aan arkayno rajo fiican. Waxanan rajadaa ku hanan karnaa innaga oo gacmaha is qabsanna, oo wada shaqayn Gudo iyo dibadba leh yeelanna. Caddaaladna isku maamulla.
Intiinna maanta I hor fadhidaa, waxa aad timaaddeen idinka oo qof qof u socda, oo sheeganaya Somali. Waxana la idiin qaabilay Somalinimo. Sidaas ayaanad maanta ku haystaan dhalashadii dalka Ingiriiska. Anigu ma haysto dhalasho aan ahayn ta Somaliyeed. Laakiin idinku markii aad woxoogaa sannaddo ah joogteen ayaa dawladda Ingiriiska iyo boqortooyadeeduba idin tidhi isku mid ayaan nahay oo British ayaad tihiin. Balse idinmay odhan, Somaliland amma Puntland iyo hebel ...hebel kale ayaad tihiin.
Bal eeg caqligaa iyo ka aan innagu ku shaqaynayno, ee aan leenahay reer hebel haddii aan nahay reer hebel ma doonayno reer hebel, amma aan u arki la'nahay wada dhalashadeenna, jinsinimo, ee aan isku dhaqanka afka iyo diinta nahay.
Ammaanka ayaa ah mid wax walba ka horreeya, oo aan immigana ka dhigannay ka qorshahayaga ugu horreeyaa uu ka dhaqaaqayo. Waxanan bilawnay in aan Muqdisha u samayno 1000 ( Kun ) askari oo xul ah, oo ilaaliya amma qaada mas'uliyadda gobolka. Oo aan innagu bixinno mushaharkooda iyo waxa ay ku hawl galayaan.
Koox qabiilooyinkoodii cagta la mariyey amma la cabudhiyey ka soo jeeda, oo ay ku kalliftay in ay hubka qaataan, oo lagu yidhi, ' si aad reer hebel isaga celisaan hubka qaata oo dagaallama'.
Koox baahidu ay u geysey oo 100 doollar iyo wax la mid ah farta laga saaray, waana dhallin yaro ku dhalatay fawdada oo aan waxbarasho iyo mihnad midna lahay, loona sheegay in ay helayaan laba faa'iido, haddii ay nool yihiinna nolol fiican haddii ay dhintaanna Janno.
Koox ay ka dhaadhacsan tahay mabda'a ah in ay dunida ku maamulaan Islaam iyo in ay diinta saxa ah iyaga uuni wataan. Waana kuwa la baxa abu-hebel abu-hebel. Ee dhammaanba inta kale madaxda u ah.
Barri dambe waxa aan kulmi doonnaa ra'iisal wasaaraha dalkan Britain iyo dawladda Ingiriiska, waxana aan filaynaa in aan si fiican u wada hadli doonno, sidii aan maraykanka iyo Yurub u wada hadlay. Ingiriiskuna hore ayaabu dalkeenna dib uga furtay safaaraddiisii, wada shaqayn gaar ahina waa naga dhaxaysaa.
Read more about Xafaddii soo dhaweynta Madaxweynha Somaliya Xasan Sheekh ee ka dhacday LondonPdateM: 2013-02-03 12:17:34 +0100 style="display:block"